Andres Iniesta ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ စပိန်ဘောလုံးကစားသမားများ Andres Iniesta ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံးဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအများ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; '' Don Andre ''။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Andres Iniesta ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်းလူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, တိုင်းမိမိအရည်အချင်းများအကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ် Andres Iniesta အတ္ထုပ္ပတ္တိပုံပြင်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောသတ်မှတ်ထားသည်။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမပါဘဲ, Begin ပေးနိုင်ပါတယ်။
Andres Iniesta ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -ဘ0အစပိုင်း
Andre Iniesta Lujánwasဖခင်ဟိုဆေးအန်တိုနီယို Iniesta (စီးပွားရေးဂို) နှင့်မိခင်, MaríaLuján Iniesta (အိမ်သူအိမ်သားဂိုးသမား) က Fuentealbilla, စပိန်၏ quaint ရွာ၌ 11, မေလ 1984th နေ့၌ဖွားမြင်။
သူကနှစ်ဦးစလုံးကံကောင်းနှင့်ကြွယ်ဝတဲ့ကလေးကအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ့မိဘအဖြစ်ချမ်းသာ Albacete, စပိန်၏အံ့သြဖွယ်မြူနီစီပယ်ကနေလာကံကောင်း။ သူကအရာနှစ်ခုအတွက်လူသိများသော Albacete ၏မြို့တော်စည်ပင်ကမှာကြီးပြင်း; ဒေသခံစပိန်စပီကာမြင့်မားရာခိုင်နှုန်းနှင့်၎င်းတို့၏ဒဏ်ငွေစပျစ်ရည်ကို။
Andres သူလိုအပ်သမျှကိုခဲ့ရပြီးလူငယ်တစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်အဖြစ်အသက်တာ၌ချင်တယ်။ အလှည့်မှာတော့သူကိုသူ့အဘို့သူ့မိဘရဲ့ဆန္ဒလေးစား။
Andres Iniesta ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး
သူ Albacete Balompié, သူ့မွေးရပ်မြေ Albacete အတွက်ဒေသခံတစ်ဦးကလပ်နှင့်အတူ 10 ၏အသက်အရွယ်မှာကစားစတင်ခဲ့သည်။
Andres Iniesta ငယ်ဘဝဓာတ်ပုံ
တစ်ပြိုင်ပွဲများတွင်ကစားသောအခါ 12 ၏အသက်အရွယ်မှာသူစပိန်န်းကျင်ဘောလုံးကလပ်များ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Iniesta ရဲ့မိဘတွေက FC အသင်းဘာစီလိုနာနည်းပြ Enrique Orizola နဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
သူတို့၏သားဂိမ်းမှာလက်ဆောင်အဖြစ်ခဲ့ပေးထား, သူတို့ကဘာစီလိုနာလူငယ်အကယ်ဒမီသို့ Iniesta ဝန်ခံစဉ်းစားရန် Orizola ယုံကြည်စိတ်ချသွားတယ်။
မကြာသေးမီကအင်တာဗျူးမှာတော့ Iniesta ရဲ့အဖေမေးမြန်းတော်မူလျှင်ခံခဲ့ရသည်ယခုအချိန်တွင်အောက်မေ့ .. "ခင်ဗျားဘယ်လို Andre ကသူ့အိတ်တက်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ဘာစီလိုနာသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြရသည်ရသောယခုအချိန်တွင်သတိရသလဲ?" ။ သူ့ကိုအလိုအရ ..ဒါဟာသူနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့အတွက်အတော်လေးရှည်ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အသင်းဘာစီလိုနာရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံရရှိသူကျွန်တော် Fuentealbilla ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးရပ်မြေစွန့်ခွာနိုင်ဘူးအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူအသုံးပြုပုံ, La Masia, ကလပ်ရဲ့အကယ်ဒမီကိုသွားခဲ့ရတယ်။ သူကမိသားစုကိုစွန့်ခွာချင်နဲ့သူကိုယျတိုငျသှားမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးအလွန်ရှင်းလင်းသောပြောတယ်ခဲ့ပါဘူး။ "အဖေကကျွန်မဘာစီလိုနာသွားနေပါတယ်": ငါအခွင့်အလမ်းများကိုဤမျိုးသူအကယ်ဒမီအတွက်အကောင်းတစ်ဦးဖွဲ့စည်းရေးခံယူမယ်လို့မကြာခဏမလာဘဲ ... ကြောင်း Andre ငါ့ဆီသို့ရောက် လာ. ဟုတစ်ဦးကစုံတွဲရက်အကြာမှာသူ့ကိုသို့ပြောသည်။ ငါစိတ်ရှုပ်ခဲ့တယ်, ဒါကြောင့်သူကသူ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့သောအဘယ်ကြောင့်ငါသူ့ကိုမေးတယ်။ ထိုမင်းသည်ငါ့ကိုတကယ်တုန်လှုပ်ဖွယ်တစ်ခုခုသို့ပြောသည်။ သူက "ငါသှား, ကသင့်ရဲ့အိပ်မက်သောကွောငျ့သငျသညျအကြှနျုပျကိုမသွားချင်သောကွောငျ့" ။ ခဏ မှစ. ငါသည်ငါ့သားကနေအမှုအရာတွေအများကြီးသင်ယူခဲ့ကြလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ သူသာ 12 အခါသူကကျွန်မကိုအများကြီးသင်ပေးတယ်။
သူ့မိဘအတွက်အကယ်ဒမီမှာသူ့ကိုစာရင်းသွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, အရာပြီးနောက်သူသည်ငယ်ရွယ်ဘောလုံးသမားများအတွက်ဂုဏ်သတင်း, La Masia အကယ်ဒမီသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သူ၏မိဘများနှင့်အတူသွားရောက်ခဲ့သည်။ သူ့ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးပြီးနောက်သူ့မိဘအိမ်မှာထွက်ခွာသည်။ ဒါဟာတစ်နှစ် 1996 အတွက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
13 သို့မဟုတ် 14 ၏အသက်အရွယ်ကနေအများအပြားအကယ်ဒမီမတူဘဲ, FC အသင်းဘာစီလိုနာအိမ်များမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘော်ဒါဆောင်များတွင်မြို့ထဲကအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကစားသမားများ။ သို့သော် Iniesta ရုံ 12 ကြီးကငယ်ရွယ်သူတစ်ဦးဦးလက်မှတ်ထိုးရန်ကလပ်အဘို့အမြင့်မားပုံမှန်မဟုတ်သောခဲ့သည်။ အချို့ကန့်ကွက်နေသော်လည်းကလပ်သူ့ကိုကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် player ဘို့ယူကြပြီနိုင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်စုဆောင်းနှင့်အတူရှေ့ဆက်သွား၏။
ဘာစီလိုနာမှာ Andres Iniesta Start ကို
Andres Iniesta ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အဆိုပါခက်ခဲ Start ကို
လူငယ်တစ်ဦး Iniesta မကြာခဏအိမ်လွမ်းသောမိမိအားထားရှိမည်ကြီးကွာသည်သူ၏မိဘများအနေဖြင့်နေထိုင်နေရုန်းကန်။
Iniesta သူကပြောပါတယ် "မြစ်ချောင်းဟစျကျွောလေ၏" သူအဘို့ကျန်ကြွင်းရစ်သောနေ့က la Masia နှင့်သူ၏မိဘများနှင့်ကွဲကွာနေခံနေရရုန်းကန်။ သူကအရမ်းရှက်တတ်ခဲ့စဉ်ရှိကိုယ်တော်တိုင်မှထားရှိမည်။
လူငယ်တို့ Andres Iniesta သူ့မိဘပျောက်ဆုံးနေ
Andres Iniesta ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Fame မှ Rising
သူဟာနောက်ဆုံး၏နောက်ဆုံးမိနစ်များတွင်အနိုင်ရရည်မှန်းချက်သွင်းယူ, 15 ၏ Nike ကပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားအတွက်အောင်ပွဲရန်ဘာစီလိုနာလက်အောက်တွင်-1999 အသင်းအသင်းခေါင်းဆောင်, နှင့်ပြိုင်ပွဲ၏ကစားသမားအမည်ရှိ၏။ အောက်တွင် Iniesta, သူ့ဖလားမှတင်ပြဂွာဒီယိုလာ၏ရုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးထံမှဆုလက်ခံရရှိ Young က Andres Iniesta ဂွာဒီယိုလာ
မိမိအစတိုင်လ်, လက်ကျန်ငွေနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုနောက်တစ်နှစ်လက်အောက်တွင်-17 ချန်ပီယံရှစ် 2001 နှင့်လက်အောက်တွင်-19 ချန်ပီယံရှစ်အတွက်ယူအီးအက်ဖ်အေဥရောပအနိုင်ရစပိန်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
Iniesta ထို့နောက်-ကပ္ပတိန်, ကလပ်မှာရောက်ရှိလာမယ့်အပြီး ဂွာဒီယိုလာ နာမည်ကြီးသူချင်းကွင်းလယ်လူ Xavi ပြောသည်: "သင်ငါ့ကိုအနားယူသွားပါတယ်။ ဤသည်လူကလေး [Iniesta] "ကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးအနားယူသွား
သူသာ 11 မှ 1990 ကနေသရုပ်ဆောင်သောကလပ်မှာမိမိ 2001 တစ်နှစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအနေဖြင့်ဂွာဒီယိုလာအနားယူတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
အတင်းအကျပ် Young က Andres Iniesta, ဂွာဒီယိုလာ အနားယူ
Andres Iniesta ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
Andres Iniesta တစ်ဦးနှိမ့်ချခြင်းနှင့်ချမ်းသာကြွယ်မိသားစုနောက်ခံကနေလာပါတယ်။ ပုံမှန်စပိန်မိသားစု။
အဆိုပါခြစ်ရာကနေအထဲကစတင်ခဲ့သောမိမိအဖေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီး။ ဟိုဆေးအန်တိုနီယို Iniesta စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအင်ပါယာပိုင်ဆိုင်ရှေ့တော်၌ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားအဖြစ်ထွက်တော့တာပဲ။ သူလုပ်ဖို့အဘယ်အလုပ်ကိုမျှခဲ့သည့်အခါသူကစားပွဲထိုးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကမ်းရိုးတန်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Andres Iniesta Dad- ဟိုဆေးအန်တိုနီယို Iniesta
သူကအမြဲဘောလုံးတစ်ဦးကိုနှစ်သက်ခဲ့အပေါင်းတို့နှင့်အတူကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို လုပ်. , ဒါကြောင့်မိမိသားကို Andre ခြေတော်၌ဘောလုံးရှိခြင်း၏အိပ်မက်ထွက်ထွင်းနိုင်ခဲ့သည်။
စပိန်အတွက်သေးငယ်တဲ့မြို့ Fuentealbilla မှာမိမိအစောပိုင်းကာလ မှစ. ကမ္ဘာကြီးဘောလုံး၏ထိပ်သီးအစည်းအဝေးရောက်ရှိသည်အထိဟိုဆေးအန်တိုနီယိုကသူ့သားမှလာမယ့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဖခင်နှင့်အတူ Andres Iniesta ရဲ့ stong ဆက်ဆံရေးဟိုဆေး
သူကသူ့သားဝေဒနာဒါမှမဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖြစ်စေမြင်နေရသောအခါငိုလူသိများသည်။ ဟိုဆေးအန်တိုနီယို Iniesta အဆိုအရ,
"ဟုတ်တယ်, တွေအများကြီး။ ငါလွယ်လွယ်ကူကူငိုတယ်။ ငါသည်ငါ့ Andres ကိုထိခိုက်သောအခါငိုကြွေးအော်ဟစ်သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုလက်ျာဘက်မသွားဖြစ်ပါတယ် သိ. ဝေဒနာအတွက်သူ့ကိုမြင်လျှင်။ ပိုများသောဒါအချိန်လေးစာရေး Andre FC အသင်းဘာစီလိုနာမှာမိမိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်အိမ်ကနေအခါငိုဘို့ရှိကြ၏။ "
ကမ်ဘာပျေါတှငျကစားသမားရဲ့ထိပ်လက်တဆုပ်စာအတွက်ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း Iniesta နေဆဲမိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အချိန်ရှိပါတယ်။
ဟိုဆေးအန်တိုနီယို Iniesta နှင့်သားတော်, မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်နေတာ Andres Iniesta
လောလောဆယ်ဟိုဆေးအန်တိုနီယိုကမိသားစုဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း Bodegas Iniesta ပြေး။ လူတွေနေတဲ့စပျစ်ရည်နှင့်သူ့သားနှိုင်းယှဉ်ဖို့သူ့ကိုမေးသောအခါသူကပြောပါတယ် "ဒါဟာကောင်းသောအရည်အသွေး, စိတ်ရင်းနဲ့သတိပညာရှိတစ်ဦးသည်စပျစ်ရည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ "
Iniesta Sr; မိမိသားကိုသာအစဉ်အဆက်ကသူ၏ဘောလုံးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ခြင်းနှင့်ကလပ်နှင့်တိုင်းပြည်များအတွက်ကောင်းစွာဖျော်ဖြေထားပြီးဘယ်လိုရှင်းပြသည်။
"သူက, ဘာမှ၏ခေါင်းဆောင်သို့မဟုတ်ကပ္ပတိန်ဖြစ်သော်ငြားဘယ်တော့မှ" သူကပြောပါတယ်။ "သူတို့နှိမျ့ခခြွငျးနှငျ့အတူအဲဒီလိုမိမိတို့အသင်း-အိမ်ထောင်ဖက်ကရွေးချယ်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့၏သတ္တိနှင့်အခြားသူများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍအနိုင်ရသူကိုဗိုလ်မင်းရှိပါတယ်။ ငါ့သား Andres ရုံနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ "
Mother: အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံMaríaLuján Andres Iniesta ၏မယ်တော်သည်။
Andres Iniesta နဲ့အမေ, MaríaLuján
MaríaLujánမီဒီယာလူတစ်ဦး၏အများကြီးပေမယ့်သူ့သားကသူ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရဲ့ start ကတည်းကကစားထားပြီးနီးပါးတိုင်းတစ်ခုတည်းဂိမ်းစောင့်ကြည့်ကြလူသိများသူတစ်စုံတစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူး။
အစ်မ: မာရီ Iniesta Andres Iniesta ဖို့သာအစ်မနဲ့မှေးခငျြးဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်စပျစ်ရည်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေဆဲတတ်ရှိရာဒေသမှာကြီးပြင်းလာတယ်။ သူမသည်သူမ၏အဖေနှင့်မတူဘဲသူမ၏သူ့ကိုပုံနဲ့ဆင်တူတယ်။
Andres Iniesta ရဲ့ sister- မာရီ Iniesta
Andres Iniesta ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
Andres Iniesta ရဲ့သီချင်း Love Story နှင့်ဘဝပဲအမျိုးသမီးတစ်ဦးဝန်းရံ။ သူမသည်လှပတဦးတည်း, အန္န Ortiz ထက်မကတခြားဖြစ်ပါတယ်။
အန္န Ortiz နှင့်အတူ Andres Iniesta ရဲ့သီချင်း Love Story
အန္န Ortiz တစ်ကာတာလနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်-Up အတွက်အထူးကု, ပုံရိပ် consultating ဖြစ်ပါသည်,
ဆံပင်တစ်သင်းလုံးကကစားသမား, အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး, သူမသည်လတ်တလောတွင် Coton et Bois မှာအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ Iniesta ယခုနှစ် 2008 ၌သူ၏တင်းကျပ်စွာတခုတခုအပေါ်မှာဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းတွေ့ဆုံရန်။ သူမကသူ့ကိုအချို့ physiotherapy ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းနေချိန်မှာသူကသူမ၏နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလထဲမှာ 2010 Andre Iniesta က Anna ကသူ့ကလေးနဲ့အတူကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည် Valeria Iniesta Ortiz ဘွားမြင်လေ၏။ အောက်တွင်သူမ၏မိဘများနှင့်အတူ Valeria ၏ရုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
Andres Iniesta, အန္န Ortiz နှင့်၎င်းတို့၏သမီး Valeria
Andres iniesta နဲ့ Anna Ortiz ပျော်ရွှင်စွာတည်းခို၏လေးနှစ်အကြာတွင်အတူတကွ 2012 အတွက်လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး Tarragona အနီး Tamarit ၏ရဲတိုက်၌ကျင်းပသည်။
မင်္ဂလာဆောင်မှာလက်ရှိနာမည်ကြီးအမည်များများထဲတွင် Lionel Messi အဖြစ်ဟောင်းဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူးရှမွေလသည် Eto'o ခဲ့ကြသည်။
မင်္ဂလာဆောင်ကသူ၏ဇနီးနှင့် Tweet နှင့်အတူမိမိကိုမိမိ၏ရုပ်ပုံပို့စ်တင်, Twitter ပေါ်တွင်မိမိအ 3.9million နောက်လိုက်ဖို့သတင်းထင်ရှားပြီးမကြာခင်: '' Amazing နေ့က! လက်ထပ်ကာစ။'
Andres Iniesta ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံ
Andres Iniesta နှင့်သူ၏ဇနီးအသစ်က Anna Ortiz Cancun, မက္ကစီကိုကမ်းခြေပေါ်တွင်သူတို့ပျားရည်ဆမ်းခရီးကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ သူတို့ကနေသာရာသီဥတုက၏အများဆုံးလုပ်သကဲ့သို့ရှိပါသည်, ထိုတချိန်ကကျော်ကြားခဲ့သောကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံအလွန်လာပါနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်းသည်ထင်ရှား။ ,
Andres Iniesta ဇနီးနှင့်အတူပျားရည်ဆမ်းခရီးခံစား
မေလ၏ 31st တွင်, 2015, Andres နဲ့ Anna ဟာသူတို့ရဲ့ဒုတိယကလေးနှင့်ပထမဦးဆုံးသားရှိပါတယ်။ သူ၏နာမ Paolo Andrea Iniesta ဖြစ်ပါတယ်။
Andres Iniesta အပြည့်အဝမိသားစုဓာတ်ပုံကို
Andres Iniesta ကသူ့ကလေးတွေနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်အချိန်ဖြုန်းဖို့ချစ်သောသူကောင်းတစ်ဦးအဘဖြစ်၏။ သူကအမြဲကမ္ဘာကြီးကိုသင်တို့သိရကြကုန်အံ့ကြိုးစားပါ။ သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကိုအထက်တွင်မိမိသားသမီးကိုထည့်လေ့မရှိနှင့်လိုလားသူတစ်ဦးအမှန်တကယ်မိဘဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဂရုစိုကျခမညျးတျော Iniesta- Andres
ရုံနဲ့တူ ဖယ်လ်ကာအို နှင့် ရောဘတ် Lewandowski, Andres Iniesta ပျြောရှငျတဲ့မိသားစုဘဝနေထိုင်ခဲ့ထားပြီးပါပြီ။
Andres Iniesta ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-စပျစ်ရည်ကိုကုမ္ပဏီ
ဟုတ်ပါတယ်, ဟောင်းများပရီးမီးယားလိဂ်မန်နေဂျာများ ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန် နှင့်ဟယ်ရီ Redknapp စပျစ်ရည်ကိုသူတို့ရဲ့မေတ္တာသည်လူသိများခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှယခုအထိစပျစ်ဥယျာဉ်သို့မဟုတ်ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်အဖြစ်သွားလေ၏။
ပိုများသောကြောင့်, ဒီနေ့ရဲ့ဘောလုံးကစားသမားစပျစ်သီး၏စိုက်ပျိုးမှုအဖြစ် esoteric ဘာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ထက်, အားကစားကားများသို့မဟုတ်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောတိုက်ခန်းများသို့သူတို့၏စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုတင်ဖို့ပိုများပါတယ်။
သို့သော်ဖြစ်ကောင်းလျော့နည်းကောင်းစွာ, သူ့တိတ်ဆိတ်အရိပ်ကြောင့်မသိ, စပျစ်ရည်ထုတ်လုပ်မှုသို့သူ့အချိန်နှင့်ငွေနှစ်ခုစလုံးကိုထည့်ကြသူ Andres Iniesta ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဝိုင်ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင် Iniesta- Andres
မိမိအမင်္ဂလာဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ဧည့်သည်သူ၏သမီး Valeria ပြီးနောက်အမည်ရှိသော, မိမိ Iniesta ရဲ့စပျစ်ရည်ကိုမသောက်ရစေတော်မူ၏။
သူ့အဘို့၎င်း၏မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ သငျသညျစပိန်တှငျနထေိုငျခဲ့လျှင်သင်သည်လည်းသူ၏မျက်နှာကိုသူ့မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့်ဝိုင်မြှင့်တင်ကြော်ငြာထံမှထွက်ဖိုင်တွေကိုကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ, Bodega Iniesta။ ဤသည်ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွမိသားစုအထဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။
တကယ်တော့, Iniesta သူ့အဖိုးဟိုဆေးအန်တိုနီယိုကတည်ထောင်ခဲ့သည့်စပျစ်ရည်ကိုစီးပွားရေး, တစ်အခန်းကဏ္ဍယူသူ၏မိသားစုကနေတတိယမျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
စုစုပေါင်းမှာတော့သူ့မိသားစုကိုစပျစ်ဥယျာဉ် 180 ဟက်တာကျော်ရှိပါတယ်, အပေါငျးတို့ဝိုင်က၎င်း၏အထူးသီးအပွနေဖန်ဆင်းတော်ကြပါတယ်။
Andres Iniesta ဝိုင်စပျစ်ဥယျာဉ်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်နာရီ '' ဗလင်စီယာကနေ drive ကိုနှင့်မက်ဒရစ်၎င်း၏အကြီးမားဆုံးဈေးကွက်ထဲကနေနှစ်ခု-and တစ်နာရီခွဲကြာဖြစ်သော Albacete, တွင်တည်ရှိသည်။ သူ့ကုမ္ပဏီအတွက်အထူးစပျစ်ရည်ကိုအသီးအပွရိတ်သိမ်းကြသည်ရှိရာပျစ်ဥယျာဉ်၌ 35 ၏လူများ, ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် 25 နှင့် 10 အချိန်ပြည့်လုပ်ကိုင်။
Andres Iniesta ဝိုင်အသီးအပွ
စာအရေးအသား၏အချိန်ကကဲ့သို့, မိမိကုမ္ပဏီမိမိသား Paolo Andrea ပြီးနောက်မိမိသမီး Valeria ပြီးနောက်အမည်ရှိကြောင်းစပျစ်ရည်, အခြားရောင်းချပါတယ်။
သူလည်းသူက 116 ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲအတွက်အနိုင်ရရည်မှန်းချက်သွင်းယူအခါပွဲစဉ်အတွက်တစ်မိနစ်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သော "2010" ဟုခေါ်သည်အခြားစပျစ်ရည်ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။
ယေဘုယျအား, စပျစ်ရည် 1 သန်းပုလင်းမှ 1.2 တစ်နှစ်လျှင်သူ့ကုမ္ပဏီအတွက်ထုတ်လုပ်နေသည်။ မိမိအစပျစ်ရည်ကိုအရှေ့အာရှ, တောင်ဘက်အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်ဘက်အမေရိကနှင့်အနောက်နှင့်အရှေ့ဥရောပအပါအဝင် 33 နိုင်ငံတွေအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထဲမှာ UK သူတို့£ 6.50 မှ£ 17 ရောင်းချ။
Andres Iniesta ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -သူဟာတစ်ချိန်ကမက်ဒရစ်ဝါသနာရှင်ခဲ့သည်
သည်အခြားနုပျိုဘောလုံးပရိတ်သတ်လိုပဲ Andres Iniesta သူလုံးဝမိုက်ကယ် Laudrup ကိုးကွယ်လျက်ရှိသောကြောင့် Albacete နှင့်ဘာစီလိုနာအနီးကပ်ဒုတိယခဲ့သည်, မိမိဒေသခံကလပ်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ သူကကိုယ့်ကိုခြောက်ခဲ့သောအခါ, လိုနီယန်ကုမ္ပဏီကြီးသည်သူ၏ချစ်ရာသခင်သည်အခြမ်း 7-1 ရှုံးနိမ့်သူကသာသူတို့ရဲ့အများဆုံးမုန်း၏ပြိုင်ဘက်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အားမိမိသစ္စာပြောင်းလဲနေဖြင့်ကျေနပ်နိုင်သောဘက်များအတွက်နက်ရှိုင်းလိုမုနျးတီးတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
Laudrup 1994 အတွက်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်သို့ပြောင်းရွှေ့လာသောအခါသစ္စာရှိမှု၌သူ၏ပြောင်းလဲမှုနောက်ထပ်ခံရတယ်။ အစောပိုင်းကထုတ်ဖော်ပြသသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ဘာစီလိုနာနှင့်အတူပူးတွဲရသူ့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ၏အဖေဖြစ်ခဲ့သည်။
Andres Iniesta ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မြင့်မားလေးစား
စာအရေးအသား၏အချိန်ကအဖြစ်, Andres Iniesta သံသယမရှိဘဲစပိန်အတွက်အများဆုံးလေးစားဖွယ်ဘောလုံးသမားဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအစပျစ်ရည်ကိုမက်ဒရစ်သည်, မိမိမျက်နှာကြက်ပြိုင်ဘက်၏အိမျ၌အလွန်ကောင်းစွာရောင်း။
Catalonia ခုနှစ်တွင်သူဘာစီလိုနာ၏ကပ္ပတိန်အဖြစ်လေးစားသည်, စပိန်၏ကျန်သူစပိန်များအတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားအနိုင်ရသူကောင်လေးအဖြစ်လေးစားသည်။
ဒါ့အပြင်သူကလူတန်ဖိုးထားရသောပုံမှန်စပိန်မိသားစုကိုကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံလုပ်ပေးထားတဲ့တခြားဘာစီလိုနာသို့မဟုတ် Real Madrid အသင်းကစားသမားများ, နိုင်ငံရေးအငြင်းပွားဖွယ်ရာအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရပါဘူး။
Andres Iniesta ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -သူဟာအသင်းကိုဘာစီလိုနာလိုချင်တစ်ချိန်ကဘယ်တော့မှ
ဘာစီလိုနာကြယ်ပွင့် Andres Iniesta sensationally သူပိုင်းတွင်ကြောင့်ကလပ်နှင့်အတူသူ၏ခိုင်ခံ့သောမိသားစုနှောင်ကြိုးကိုတစ်ကလေးငယ်အဖြစ်ကာတာလကလပ် join ဖို့မလိုချင်ခဲ့ဘူးထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သူကအသစ်တစ်ခုကိုစိန်ခေါ်မှု, ဝေးနေအိမ်ရွှေ့ဖို့တစ်ရှာပုံတော်ချင်တယ်။
သူ၏စကား၌, သူတို့ကိုငါနဲ့ငါ့မိသားစုနှောင်ကြိုးစဉ်းစားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "ငါသည် လာ. ချင်ခဲ့ပါဘူး။ ငါ "ဒါကြောင့်အဝေးမှာသူတို့မရှိဘဲတစ်ဦးအရပ်သို့သွားရန်လိုအပ် Iniesta ပြောသည် ပိန် SPORTS ။
Iniesta ဆက်လက် ..."ငါ့အဖေနှင့်အတူငါဆှဖှေဲ့အများကြီးယုံကြည်မှုအများကြီးရှိသည်နှင့်ငါသူသည်ငါ့ကိုအမှုအရာကိုပြောပြသောအခါ, ထိုအများအားဖြင့်အောင်မြင်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ငါသည်ငါ့ခမည်းတော်သည်လေးစားခြင်းနှင့်ငါကျဆင်းယူခဲ့ရတယ်သိတယ်။ FC အသင်းဘာစီလိုနာကစားငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးနောက်ကျနော်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ကိုငါ့အသက်တာ၏အဆိုးဆုံးလအတွင်းကိုမွငျလြှငျ, ဒါပေမယ့်လူတိုင်းအတွက်, နေ့စဉျ၏အကူအညီဖြင့်ပြုလုပ်အများကြီးပိုကောင်းခဲ့ပါတယ်။ "
ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, Iniesta ရဲ့ကနဦးကြောက်စရာဆုံးဖြတ်ချက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုကောင်းစွာထုတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။
Andres Iniesta ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-မိမိအများစွာကို NICKNAME
Iniesta အမည်ဝှက်တဲ့အရေအတွက်ကရှိပါတယ်။ အဆိုပါစပိန်စာနယ်ဇင်းမကြာခဏအဖြစ်သူ့ကိုရည်ညွှန်း ဒွန် Andres တချို့သူ့ကိုမခေါ်စဉ် အယ်လ် Ilusionista ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိအနိုင်စွမ်းနှင့်အစေးအပေါ်မည်သည့်အနေအထားတွင်ကစားရန်စိတ်အားထက်သန်၏ (The Illusionist) ။
အခြားသူများကသူ၏ခြွင်းချက်ဘောလုံးထောက်လှမ်းရေး၏အယ်လ် Cerebro (အဆိုပါဦးနှောက်) သူ့ကိုခေါ်ပါ။
Real Madrid အသင်းရဲ့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား galactico မှာတူးမှာဆင်း-to-မြေကြီးတပြင် Iniesta ကိုလည်းအယ်လ် Anti-galactico ဟုအမည်ပေးထားသည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Iniesta ရဲ့ palid အသားအရေလည်းသူ့ကိုအမည်ပြောင် (အဆိုပါပုလဲနိုက်) ရရှိထားပြီးပါပြီ။
Andres Iniesta ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်-ပြီးတာနဲ့တစ်ဦး IG အကောင့်ခိုးယူ
Andre Iniesta ရုံအခြားမည်သူမဆိုတူသော Instagram ကိုအသုံးပြုသည်။ "ကျွန်မတစ်ခုကသူ့ကလေးတွေ၏ဓာတ်ပုံများကိုယူ likes သူကိုဖခင်ဖြစ်သူ yummy အစားအစာ, နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဆောက်အဦးလည်းဖြစ်၏" သူကတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကအလတ်စားပို့စ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်။
တစ်နေ့မှာ Iniesta ရုတ်တရက် Instagram ကိုသူတစ်နည်းနည်းနဲ့သူတွေကိုမိသားစု, အစားအစာ, နှင့်ဗိသုကာဓာတ်ပုံများနှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ၏စည်းကမ်းချက်များကိုချိုးဖောက်ချင်ပါတယ်ကြောင့်ဟုဆိုကာနှင့်အတူ, သူ့အကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Iniesta တစ်နည်းနည်းထူးဆန်းတွေ့နှင့်သူ၏ Instagram ကိုရှိနေခြင်း, သတိပေးခြင်းမရှိဘဲ, အခြား Andre Iniesta ဖြင့်အစားထိုးသောအခါအခြေအနေကသာပိုပြီးရည်မှတ်တယ်။
Iniesta သည်သူ၏ဓာတ်ပုံများကိုပျောက်ကွယ်နှင့်သူ၏အသုံးပြုသူအမည်တစ်စုံတစ်ဦးမှပယ်ပေးအပ်ခံခဲ့ရသည်ပင်ပြီးနောက်, ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်နှင့်အတူ Instagram ကိုမှအကြိမ်ပေါင်းများစွာထွက်ရောက်ရှိကြိုးစားခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာ Instagram ကို Iniesta ရဲ့မူလအကောင့်ပြန်လည်တယောက်သောသူအားကျော်ဘောလုံးကြယ်ပွင့်အတင်းအကျပ်, ညာသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏, အနည်းငယ်လျော့နည်းနှစ်လိုဖွယ်အသုံးပြုသူအမည်။
ပေးမယ့်ကြေညာချက်ထဲမှာ Gizmodo, Instagram ကိုဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုအလွန်လျင်မြန်စွာဖြစ်ပျက်နှင့်မဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတရားမျှတအကြောင်းမရှိဘဲရန်စီမံခန့်ခွဲပုံကိုအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သို့မလိုက်မသွားဘူး။
"ကျနော်တို့ဒီမှာနေတဲ့အမှား လုပ်. အဖြစ်မကြာမီကျနော်တို့ကအကြောင်းသင်ယူအဖြစ်အကောင့်ပွနျလညျထူထောငျ" ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းပန်ငါတို့သည်သူ့ကိုအစေဒုက္ခအဘို့အမစ္စတာ Iniesta ထွက်သွားပါ။ "
Javi Martinez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Bojan Krkic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်